I-Syria iindaba zokuhamba | eTurboNews
Ikhaya » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSyria eziQhekezayo
Udidi-iSyria Breaking News
Iindaba ezaphulayo ezivela eSyria -Uhambo noKhenketho, iFashoni, uLonwabo, iNkcubeko, iNkcubeko, imisitho, uKhuseleko, uKhuseleko, Iindaba kunye neTrends.
I-Syria kunye neendaba zokhenketho zabahambi kunye neengcali zokuhamba. Iindaba zamva nje zokuhamba kunye nezokhenketho eSyria. Iindaba zamva nje kwezokhuseleko, iihotele, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, umdla, ukhenketho kunye nokuhamba eSyria. Iinkcukacha zokuhamba ngeDamaskus. ISyria, ngokusemthethweni yiRiphabhlikhi yaseArabia yaseArabhu, lilizwe elikwiNtshona yeAsia, elingqamene neLebhanon kumazantsi-ntshona, uLwandle lweMeditera ngasentshona, iTurkey emantla, i-Iraq empuma, iJordani emazantsi, kunye no-Israyeli ukuya emazantsi-ntshona.
Iindaba zaseIran eziQhekezayo
I-Iran ibanga ukuba iinqwelo-moya zase-US 'zisemngciphekweni' weMahan Air ...
Imithombo yeendaba yaseIran ibanga ukuba imikhosi yomkhosi wasemoyeni wase-US 'yabanjwa ngokungakhuselekanga' e-Iran ...
I-Turkey ivula iiGates eYurophu ngama-Aram
Matshi 1, 2020
IYurophu iphaphile, hayi i-Coronavirus kuphela kodwa iimbacu ezivela eSyria zingena eSchengen ...
I-Etihad Airways iphawula uSuku lweeMbacu lwe-UN ngokunceda ...
UMphathiswa wezoKhenketho eSyria: Umsebenzi oqhubekayo wokutsala ...
Inqanaba lesilumkiso kuhambo lwaseMelika lokundwendwela ...
ISiriya yamkela iindwendwe ngezandla ezivulekileyo: Ngaba iSyria ikhuselekile ...
AbaseSiriya badubula imijukujelwa ekhupha umkhosi waseRussia ...
I-AIRBNB ithetha ngesigqibo seNkundla ePhakamileyo e-US ...
Ingcebiso ngenqwelomoya yenqwelomoya e-airspace ecaleni kweDamasko ...
Imicimbi ye-Eurocontrol ilumkisa ngeenqwelo moya ngaphezulu 'kunokwenzeka ...
Abasebenzi abangama-6 kunye nabakhweli abangama-26 babulawa eRashiya ...
UNobhala Jikelele we-UNWTO uTaleb Rifai eSyria ukunceda ...
Wonwabile uChanukah evela kwilizwe lemimangaliso: Syria
Inkundla ephezulu yolawulo yase-Greek ivuma ...
Ukhenketho lwezoNyango? Kuthekani ngeDamasko, eSyria?
Ukuguqula ukuFudukela eSyria